Home News Ciidamo ku Go’doonsan wadada xariiriso Balcad iyo Jowhar
Ciidamo ku Go’doonsan wadada xariiriso Balcad iyo Jowhar
Wararka aynu ka heleeyno magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi ay ku xayiran yihiin saraakiil iyo ciidamo la socda kuwaasi oo ka mid ah kuwa xoogga.
sababta halkaasi aysan uga soo dhaqaaqi karin ayaa lagu tilmaamay in aysan kusoo dhiiran karin in jidkaasi ay soo maraan,waxaana laga cabsanayaa in al-shabaab weeraro xoogan ku qaadaan.
Saraakiisha qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa ay sheegeen in aysan suuragal aheeyn in jidkaasi lagu dhiirado,sababtoo ah ayeey yiraahdeen al-shabaabka ku sugan waxaa ay heeystaan hub culus iyo dagaalamayaal badan.
Dowlada Soomaaliya iyo Hogaanka Ciidamad Amisom ayeey ka dalbadeen in ay jidkaasi xal u raadiyaan oo ay weerar qorsheeysan kusoo qaadaan si shabaab kooga nadiifiyo.
Deegaan u dhaxeeya balcad iyo jowhar waxaa maalmo ka hor lagu weeraray sargaal ka tirsan ciidamada xoogga,waxaana la dilay ku dhawaad 10-askari oo la socday,taas ayaana sii xoojineeysa baqdinta
Previous articleWasiirka Maaliyadda oo soo saaray warkhad uu ku sheegay in baaritaankii guddiga maaliyadda uu yahay been abuur
Next articleSafaaradda Maraykanka oo saxday been uu Ra’iisal Wasaare Kheyre ku faafiyay baraha bulshada
Maamulka Galmudug oo ku fashilmay Qorshe Al-shabaab looga Saari Lahaa...